HAALA OROMIYAAN YEROO AMMA KEESSA JIRTU KFO NI YAADDEESSAA IBSA KONGIREESII FEDERAALAWAA OROMOO-KFO IRRAA KENNAME – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsHAALA OROMIYAAN YEROO AMMA KEESSA JIRTU KFO NI YAADDEESSAA IBSA KONGIREESII FEDERAALAWAA OROMOO-KFO IRRAA KENNAME
HAALA OROMIYAAN YEROO AMMA KEESSA JIRTU KFO NI YAADDEESSAA
IBSA KONGIREESII FEDERAALAWAA OROMOO-KFO IRRAA KENNAME
Yeroo ammaa kana naannoo Oromiyaa bakka adda addaa keessatti waliit bu’iinsa Raayyaan Ittisa Biyyaa fi hidhattoota garagaraa gidduutti mul’ata akka jiru fi uummata goola akka jiru argaa fi dhageetti irraa hubachuu dandeenyeera. Akka fakkeenyatti caqasu yoo barbaachiise godina Gujii Lixaa ganda Finca’aa jedhamutti humni mootummaa kan itti shakkamu meeshaan guddaan dhukafamee lubbuun namoota 13 galafatameera. Itti dabalees hidhattoonni naannoolee biroo gara naannoo Oromiyaa godinoota Wallagaa, Booranaa, Gujii fi Harargee keessa seenuun ummata Oromoo ajjeesaa, saamaa fi buqqisaa akka jiranu qaamolee adda addaa dabalatee mootummaanis amaneera.
Uummati Oromoo injifannoo aarsaa guddaan argate eeggachuuf sababa waliit bu’insa kanatiin tifkachuu fi firiisaa dhandhamachuu dadhabu qofa utuu hin taanee, isa itti aanutti kallattii qabsoo misoomaa fi guddinaatti ce’uun gufatee ummati keenya booyichaa fi gadadoo biraatiif saaxilamuun isa gadda guddatu nutti dhage’ameera. Keessattu dhiya Oromiyaa godinalee Wallaga afranii fi kibba Oromiyaa godinalee Gujii fi Booranaatti gochi dhiyeenya kana raawwatamee ammas aarsaa biraatiif kan nu affeeruu fi qisaasama Hawaasi-Diinagdee nutti fidu kan dande’uusa ni amanna. Rakkoolee asiin olitti caqafaman akka itti hin fufnee fi kan caalutti akka hin galleef KFOn tarkaanfii asii gadi hatattaamaan akka fudhatamu waamicha godha.
1. Mootummaa fi Addi Bilisummaa Oromoo waldhabdee isaan gidduu jiru hatattaamaan furanii Raayyaa Ittisa Biyyaa fi Hidhattoota uummata keessa faca’anii jiran akka uummata keessaa dachafatanu cimsee gaafata. Waliigalteen qaamolee kunneen gidduutti raawwatame ummati akka beeku fi hojiirras akka oolu ni hubachiifna.
2. Mootummaan Federaalaa hidhattoota kutalee biraa irraa naannoo Oromiyaa seenanii uummata ajjeesaa, saama fi buqqisa turani fi jiranu akka dhaabsisu cimsinee gaafanna.
3. Hawaasooti Itiyoophiyaa, qaamoleen amantaa, maanguddooti biyya fi addunyaa rakkoo ummataa keessa jiru hubatanii qaama furmaataa fi araaraa akka ta’anu kabajan gaafanna.
4. Mootummaaleen naannoo Oromiyaa fi federaalaa akkasuma haawasi biyya keessaa fi biyya alaa lammiilee buqqa’anii fi saamamaniif deeggarsaa akka godhanu maqaa ummata miidhamaniin ni gaafanna.
5. Qeerroon uummata Oromoo akkuma asiin duraa eennuyyuu odoo hin loogiin uummata isaa cina dhaabbatee injifannoo aarsaa isaatiin argame akka tiksu adaraa jechuun waamicha goona.
6. Mootummaan Itiyoophiyaa uummata humnaan bulchuun faallaa dimookiraasii ta’uunsa akkuma beekamu ta’ee, mootummaan kun rakkoo biyya kanaa qophaa hiiku akka hin dandeenye beeke paartii taayita irra jiru dabalatee qaamoleen dhimmi ilaalu hundii kan keessatti qooda fudhatu Mootummaan Waliigalaa Biyyoolessa (National Consensus Government) akka hundeeffamu irra deebinee ni gaafanna.
Finfinnee: Muddee 23, 2011
BIYYA TOKKO KEESAA HOOGANSA LAMAA fii jiruuf jireenya bifa lamaa…Ethiopia!
Abbaa Gadaa Bayyanaa Sanbatuu akkana kinoo ummata ifii keessa gadi bu’anii rakko inni qabu waliin furuun.